Kooxda Chelsea oo amaah ku doonaysa Weeraryahan ka tirsan Real Madrid – Gool FM
Kooxda Chelsea oo amaah ku doonaysa Weeraryahan ka tirsan Real Madrid
Haaruun March 25, 2020
(London) 25 Mar 2020. Kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa in ay ka fiirsanayso in ay amaah ku soo qaadato Weeraryahanka Real Madrid ee Luka Jovic.
22-sano jirkaan ayaa ku soo biiray Madrid xagaagii hore kaddib markii la soo qaatay naadiga reer Jarmal ee Eintracht Frankfurt, halkaas oo uu ku dhaliyay 27 gool 48 kulan oo uu u ciyaaray intii lagu jiray 2018-19.
Xiddigan ayaa u dhaliyay labo gool 24 kulan oo uu u saftay Los Blancos ilaa iyo haatan, waxaana tababare Zinedine Zidane uu diyaar u yahay inuu si ku meel gaar ah xagaagan iskaga diro.
Real Madrid ayaa haysata rajada ah in Jovic uu weli guulo ku gaari karo garoonka Bernabeu, sidaas darteed diyaar uma ahan inay iibiyaan isaga, taas bedelkeeda waxay rajaynaysaa in amaah ku dhiibto adeegga xiddigan, isagoo amaahdaas ka caawin doonto inuu dib u helo kalsoonidiisii hore ee gooldhalinta.
Jariiradda Metro ayaa Warinaysa in Chelsea ay qorsheynayso inay amaah kula soo wareegeyso Jovic si ay tartan dheeri ah ugu geliso Tammy Abraham, iyadoo mustaqbalka Michy Batshuayi iyo Olivier Giroud aan la hubin.
Si kastaba ha noqotee heshiis kasta waxaa saameyn ku yeelan kara xaqiiqda ah in Jovic uu wajahayo xukun macquul ah oo xabsi ah ee dalka Serbia kaddib markii uu jabiyay xeerar karantiil oo ah inuu booqdo saaxiibtiis, iyadoo lagu jiray xannibaadda Coronavirus.
Kooxda Manchester City oo ku soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa Fabian Ruiz
Kooxda Barcelona oo qaboojisay xiisihii ay u qabtay Aubameyang & Laacibka ay awoodeeda isugu geynayso oo la ogaaday